HomeBank: App fitantanana kaonty manokana maimaim-poana sy misokatra | Avy amin'ny Linux
Ity dia avy amin'ny fandaniana isan'andro ka hatramin'ny fandaniana isan-taona, toy ny premium premium, fandoavan-karatra, petra-bola amin'ny banky sy ny hafa koa tsy maintsy manao ezaka manokana isika hahatsiarovantsika ny antsipiriany ara-bola rehetra. Na izany aza, eo foana ny loza mety hitranga amin'ny tsy fanananao crédit na fandoavam-bola. Ho an'ity karazana toe-javatra ity dia afaka mampiasa HomeBank isika.
HomeBank dia fampiharana fitantanana ara-bola manokana voasoratra amin'ny fiteny fandaharana C ary ny interface graphic dia mampiasa GTK +Ho fanampin'izay, HomeBank dia maimaim-poana, loharano misokatra navoaka teo ambanin'ny GPL kinova 2 sy ny cross-platform.
1 Fandraisana HomeBank
2 Ahoana ny fametrahana HomeBank amin'ny Linux?
3 Ahoana ny fampiasana Homebank?
HomeBank mora ampiasaina ary feno tabilao sy safidy fanaovana tatitra, manana endri-javatra mitovy amin'ny zavatra antenainao avy amin'ny fitaovana hafa: manafatra avy amin'ny Quicken, Microsoft Money, na endrika mahazatra hafa, mahita ny raharaham-barotra indroa, karazana kaonty marobe, fifampiraharahana misaraka, fitaovana fanaovana teti-bola ary maro hafa.
ihany koa ahafahantsika mamaritra sokajy hanasokajiana sy hamaritana ny fifanakalozana tsirairay, ohatra, rehefa manao fividianana entana, mampiditra lasantsy sns. Azonao atao ny mamorona sy manome sokajy isaky ny karazana fifanakalozana. Ity dia tsy vitan'ny hoe manampy anao hamantatra haingana ny fifanakalozana tsirairay fotsiny ianao, fa hanome anao ny fahaizana mandamina, manivana ary mamakafaka avy eo.
HomeBank dia mitahiry ny rakitrao ao anaty rakitra antsoina hoe walletNoho izany, hanombohana ny fampiasana azy, amin'ny fotoana voalohany ampiasanao ny fampiharana dia tsy maintsy mamorona poketra vaovao ianao ary fenoy kaonty, mpandray tombony ary sokajy.
Entre Ny fiasa lehibe izay azontsika asongadina amin'ity fampiharana ity dia hita:
Azonao atao ny manafatra angona avy amin'ny CSV, OFX, QIF ary Amiga. Etsy ankilany, azonao atao ny manondrana ny angona HomeBank mankany amin'ny endrika QIF.
Azonao atao ny manonta ireo karazana tatitra momba ny HomeBank, ao anatin'izany ny teti-bola, ny hetsi-panoherana tafahoatra, ny fotoana fironana ary ny statistika. Azonao atao ihany koa ny mitahiry firaketana ny fifanakalozana mandeha ho azy.
Azonao atao ny mampiasa ny sary sy ny fitaovana sivana isan-karazany.
Izy io dia manohana fiteny iraisam-pirenena 56.
HomeBank, misy rindrambaiko fitantanana kaonty manokana ao amin'ny Microsoft Windows, FreeBSD, ary GNU / Linux. Izy io dia natolotry ny antoko fahatelo mankany NMacOSX.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa Linux dia afaka mahita kinova fonosana ao amin'ny trano firaketana mahazatra.
Ahoana ny fametrahana HomeBank amin'ny Linux?
Noho ny lazan'ilay fampiharana izany dia hita amin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux ka ny fametrahana azy ao amin'ny rafitray dia tsotra.
Raha toa ka ireo mpampiasa Debian na rafitra mifototra aminy dia afaka mametraka HomeBank miaraka amin'ny:
Mandritra izany ireo izay mpampiasa ny Ubuntu, Linux Mint na ny rafitra mifototra amin'ny Ubuntu dia tokony hanampy ity tahiry manaraka ity amin'ny rafitrao, noho izany dia tsy maintsy manokatra terminal misy Ctrl + Alt + T isika ary manatanteraka azy:
Manavao ny lisitry ny fonosana sy tahiry izahay
Ary farany dia apetrakay amin'ny:
Para Ireo izay mpampiasa openSUSE amin'ny endriny rehetra, apetraho miaraka amin'ny:
Si mpampiasa Gentoo ianao dia azonao apetraka ity rindrambaiko ity amin'ny baiko manaraka:
Mandritra izany ireo mpampiasa Mandriva dia mametraka miaraka aminy:
Raha mampiasa ianao Arch Linux, Manjaro, Antergos na fizarana mifototra amin'ny Arch Linux azonao apetraka miaraka:
Farany, Ho an'ireo mpampiasa ny Fedora, CentOS, RHEL na izay fizarana azo avy amin'ireo dia apetranao amin'ny:
Ahoana ny fampiasana Homebank?
Araka ny voalaza teo aloha ilaina ny mamorona poketra amin'ny fampiharana izay manomboka amin'izany dia afaka manomboka manondro ny karazana fandaniana, ny fifanakalozana, ny fandoavam-bola ary ny hafa isika.
Ho an'ity tsy maintsy mandeha any amin'ny menio fangatahana isika ary miditra "File -> Vaovao" eto dia afaka mamorona poketra vaovao isika.
Optionally, afaka manondro fananana poketra, toy ny anaran'ny tompony, amin'ny fisafidianana File -> Properties.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » HomeBank: fangatahana kaonty manokana sy maimaim-poana
SUSE Linux novidian'ny orinasa soedoà EQT Partners amin'ny $ 2.5 miliara